Nyowani yekuvandudza mabheji ewatchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 | Ndinobva mac
Nyowani yekuvandudza mabheji ewatchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5
Munguva yemasikati ezuro Apple yakaburitsa beta shanduro dze watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 yevagadziri. Mune idzi shanduro nyowani dzebeta izvo zvakajairika kugadzirisa mabug uye mhinduro kumatambudziko akaonekwa mune yapfuura vhezheni yevagadziri yakawedzerwa
Mune ino kesi, yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.2.1 yakaburitswawo kune vese vashandisi uye nayo iyo iyo mhinduro yedambudziko rinokanganisa kuchengetedzeka kweHomekit. Kune rimwe divi, vashandisi ves betas ari mushanduro 11.2.5 manhamba asinganyatso kuenderana nemamwe ese uye inova kuvhurwa kunoshamisa. Uye ndezvekuti kusagadzikana kwakawanikwa mune ino vhezheni yeiyo sisitimu inoshanda iyo yakabata zvakananga vashandisi vane mano akachenjera uye neshanduro iyi nyowani kutadza kunogadziriswa.
Apple inoenderera nekuwedzera beta vhezheni kune vanogadzira uye inoenderera pamwe neyakagadziriswa bug, asi munguva pfupi yapfuura zvinofanirwa kutaurwa kuti idzi shanduro dzinounza mamwe matambudziko ezvekuchengetedza kupfuura zvakajairwa saka nekudaro zvakakosha kuti Apple itarise kune izvo inoburitsa zviri pamutemo, izvo isu tine kunzwa kwekuti yakavhurwa isina kunyanyisa kudzora neiyo firm.
Iye zvino beta beta shanduro dzeIOS dzinogara pa11.2.5, 11.2.1 yevashandisi vasina beta uye yeWOSOS tinosvika ku4.2.2 uye tvOS 11.2.5. Panguva ino mu macOS iyo Inowanikwa beta ndeye High Sierra 10.13.3 yevagadziri, uye nekudaro kusvika svondo rinouya hapana shanduro nyowani dzinotarisirwa kusvika, ndizvo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani yekuvandudza mabheji ewatchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5
Jeff Williams anoti Apple ichaisa mari inodarika $ 1 trillion muvanogadzira North America
Djay Pro 2 ye mac inoshandisa huchenjeri hwekugadzira kusanganisa matra